Global Voices teny Malagasy » Thailandy: Voasakana ny WordPress.com · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Febroary 2019 3:01 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Thailandy, Tiorkia, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra voalohany)
Fibahanam-pejy ao Thailandy (TOT – Orinasan'ny Finday ao Thailandy): Ity pikantsary ity dia nalain'i Prachatai.com  rehefa nakatona ny fidirana amin'ny sehatra fibilaogiana malaza WordPress.com (22 Aogositra 2007):
Miala tsiny. TOT Plc., amin'ny maha-fikambanana ho an'ny vahoaka Thailandey azy, dia nametra ny fidirana amin'ity tranonkala ity satria misy votoaty, lahatsoratra, ary/na sary tsy mendrika ka misy fiantraikany amin'ny sain'ny vahoaka Thailandey manerana ny firenena izany ka tsy azo ekena. “
( Loharanon-tsary: National Blockpages Gallery  tao amin'ny Prachatai.com  | Global Voices Advocacy Blog  )
Ny 22 Aogositra 2007, nosakanan'ny  TOT  (Manampahefan'ny Fifandraisandavitra) ny fidirana tamin'ny sehatra famahanana bilaogy wordpress.com ka tsy nahafahan'ny mpisera Aterineto Thailandey hiditra tamin'ny WordPress Thailandey  sy ny bilaogy rehetra miantrano ao amin'ny wordpress.com  . “ Nisy fanamarihana miseho rehefa miezaka ny miditra amin'ny pejy WordPress: ” Miala tsiny. TOT Plc., amin'ny maha-fikambanana ho an'ny vahoaka Thailandy azy, dia nametra ny fidirana amin'ity tranonkala ity satria misy votoaty, lahatsoratra, ary/na sary tsy mendrika ka misy fiantraikany amin'ny sain'ny vahoaka Thailandey manerana ny firenena izany ka tsy azo ekena. “
Nanamafy ny Fahalalahana Manohitra ny Sivana  ao Thailandy (FACT) fa “ mbola tsy azo nidirana ny WordPress.com tao amin'ny tolotra TOT hatramin'ny alin'ny zoma 24 Aogositra 2007. Tsy misy hamantarana izany mihitsy satria indraindray azo nidirana indraindray tsy azo nidirana izany. “
Ny 17 Aogositra 2007, nanakana  ny fidirana tamin'ny sehatra wordpress.com  iray manontolo ny fitsarana sivily Fatih faharoa ambaratonga voalohany Tiorka taorian'ilay voalaza fa fanalam-baraka an'ilay mpandala ny famoronana Islamika  Tiorka, Adnan Oktar, fantatra amin'ny anarana hoe Harun Yahya  .
Fanavaozam-baovao: Ato anatin'ity rakipeo avy any Thailandy ity, miresaka amin'ireo bilaogera efatra malaza indrindra any Thailandy momba ny lalanan'ny heloka an-tserasera, ny sivana amin'ny aterineto ary ny fanakanan'ny mpanome tolotra aterineto TOT ny wordpress.com ny namako sady mpiara-miasa amiko, David Sasaki , talen'ny fitateram-baovaon'ny  Global Voices. Henoy etsy ambany ny rakipeo azo. Azonao atao ihany koa ny maka ny dika PDF misy ilay Lalanan'ny Heloka An-tserasera ary mamaky ny antsafa teo aloha  niaraka tamin'i CJ Hinke, mpanorina ny FACT  sady mpandrindra ny fanentanana FACT , ny toe-draharaha momba ny sivana tany Thailandy ary ny fifandraisany sy ny vokany vokatry ny lalàna vaovao momba ny heloka an-tserasera.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/13/134840/
 National Blockpages Gallery: https://mg.globalvoices.org https://advocacy.globalvoicesonline.org/blockpage/main.php?g2_itemId=119
 WordPress Thailandey: http://th.wordpress.com/
 Fahalalahana Manohitra ny Sivana: http://facthai.wordpress.com/2007/08/26/tot-blocked-wordpress/
 mpandala ny famoronana Islamika: http://commentisfree.guardian.co.uk/brian_whitaker/2007/05/the_evolution_of_daft_ideas.html
 Adnan Oktar, fantatra amin'ny anarana hoe Harun Yahya: http://en.wikipedia.org/wiki/Harun%20Yahya
 antsafa teo aloha: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2007/06/13/beat-the-censors-a-gift-of-freedom-for-thai-internet-users/
 fanentanana FACT: http://facthai.wordpress.com/2007/06/06/fact-mob-ilisation-1pm-saturday-june-9-pantip-plaza/